General Cabdullaahi Xasan Bariise oo laga qaaday Xilal Muhiim ah uu u hayay Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed. - jornalizem
General Cabdullaahi Xasan Bariise oo laga qaaday Xilal Muhiim ah uu u hayay Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed.
Sida ku cad wareegto ka soo baxday xafiiska taliyaha Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed Gen Cabdixakiin Daahir (Saacid) waxaa laga qaaday xilkii uu hayay General Cabdullaahi Bariise ee ahaa taliyaha hoggaanka baarista dambiyada CID xilkaasoo uu hayay muddo ka badan 2 sanno waxaana u magacaabay taliyihii hore ee Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed Gen Shariif Sheekhuna Maye.
Waxaa sidoo kale General Cabdullaahi Xasan Bariise horey looga qaaday Xilkii Afhayeenka Booliiska Soomaaliyeed iyadoona Xilkaasi loo magacaabay Sargaal kale oo katirsan Ciidanka Booliiska.
Gen Bariise oo laga qaaday labada xil ee muhiimka ah ayaa hada waxaa loo magacaabay madaxa hoggaanka saadka ee Ciidanka Booliiska, sidoo kale taliyhii akadeemiyada Ciidanka Booliiska ee General Kaahiye S/Guuto Dhega caleen ayaa isna laga qaaday akadeemiyada waxaana loo dhiibay hoggaan lagu magacaabo hoggaanka kormeera.
Labadan jago ee loo kala magacaabay Bariise iyo Dhegacaleen ayaan ahayn kuwo sidaa u miisaan weyn marka loo barbardhigo jagooyinkii hore ee ay muddada dheer ka hayeen Ciidanka Booliiska ee kala ahaa madaxa CID-da iyo akadeemiyada.
Taliyaha Cusub ee Booliiska ayaa wada isbadalo uu kusameenayo Hogaanka Booliiska waxa ayna isbadaladan uu Wado taliyah ay saameesay xubno dhoor ah oo si weyn ula soo shaqeeyay Taliyaashii hore ee Booliiska Soomaaliya.